क्यान्सर बिजेता र कलाकारबीच अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस, समयमै रोग पहिचान गर्न क्यान्सर विशेषज्ञ डा. सुदिपको आग्रह « Nepal Health News नेपालको नं.१ जनस्वास्थ्य पत्रिका
४० वर्ष नाघेका हरेक महिलाले क्यान्सर स्क्रिनिङ गर्नुपर्ने
२०७८, २४ फाल्गुन मंगलवार १६:२९ मा प्रकाशित
जनस्वास्थ्य सरोकार, ललितपुर । ललितपुरको हरिसिद्धिस्थित नेपाल क्यान्सर हस्पिटलमा क्यान्सर बिजेता र कलाकारहरुबीच अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाइएको छ ।
नेपाल क्यान्सर सपोर्ट ग्रुपको प्रस्तुतिमा २९ औं पटक भएको सुदिप्त क्यान्सर सर्भाइभर मिटको आयोजना गरी आज अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाइएको हो ।
सो अवसरमा वरिष्ठ नायिका करिश्मा मानन्धर, गीतकार एवं गायिका अभय सुव्वा र गायिका संगिता शाक्य लगायत ४ दर्जनभन्दा बढी क्यान्सर बिजेता महिलाहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
सो अवसरमा नेपालमा उपचारपश्चात् पूर्णरुपमा क्यान्सर निको भएकाहरुले मुलुकमै क्यान्सरको प्रभावकारी उपचार भएकोमा खुशी व्यक्त गर्नुभयो ।
समयमै पहिचान गर्न सकेको अवस्थामा क्यान्सर रोग निको हुने बताउँदै वरिष्ठ क्यान्सर विशेषज्ञ एवं हस्पिटलका अध्यक्ष डा. सुदिप श्रेष्ठले आफ्नो स्वास्थ्यप्रति ख्याल गरी समयमै रोग पहिचान गर्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो ।
नेपाल क्यान्सर हस्पिटलकी निर्देशक एवं सुदिप्त क्यान्सर सर्भाइभर मिटकी संयोजक स्वरुपा श्रेष्ठले अमेरिकादेखि आएर हस्पिटलमा उपचारपश्चात् निको हुनेहरुको संख्या बढिरहेको बताउनुभयो । उहाँले ४० वर्ष नाघेका हरेक महिलाले क्यान्सर स्क्रिनिङ गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
वरिष्ठ नायिका करिश्मा मानन्धर, गीतकार एवं गायिका अभय सुव्वा र गायिका संगिता शाक्यले सफल उपचारपश्चात् निको भएकाहरुले आत्मबल कायम राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्यानुभयो ।
हस्पिटलमा क्यान्सर उपचार गराइरहनुभएकी पत्रकार कोपिला गौतमले आफन्तहरुबाट आत्मबल बढ्ने किसिमका सुझावको अपेक्षा गर्नुभयो ।
सो अवसरमा प्रमिला मानन्धरले आफ्नो श्रीमान्को नाममा ५ लाख रुपियाँ र क्यान्सर विजेता रोज श्रेष्ठले नेपाल क्यान्सर सपोर्ट ग्रुपलाई असहाय र विपन्नको सहयोगका लागि नेपाल क्यान्सर सपोर्ट ग्रुपलाई ५ लाख रुपियाँ हस्तान्तरण गर्नुका साथै सुदिप्त क्यान्सर सर्भाइभर मिटकी संयोजक स्वरुपा श्रेष्ठलाई अभिनन्दन गरिएको थियो ।